ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ – Thutastar
ကျနော် ရည်းစားမရခင် အထိ တကယ်ကို ပိန်ပိန်သေးသေးလေးရယ်… G-fatt သွားတိုက်နေတဲ့ ပုံကမှကိုယ့်ထက် တောင့်ဦးမယ် ကိတ်ဦးမယ်ဆို။ အဲ့ဒါ သူမနဲ့ မတွဲခင် အချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့… ချစ်သူသက်တမ်း 1 နှစ်လောက်နဲ့ J-fire ဘော်ဒီမျိူး ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရလာခဲ့တယ်လေ.. နည်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံလားလို့။ အဓိကကတော့ သူမကြောင့်ပေါ့ဗျာ.. Body Weight မတက်ပဲ နေပါ့မလား.. ဘယ့်နှယ့်ဗျာ အားနေ စားမယ် ဆိုတာချည်း… ရန်ကုန်မြို့မှာ သူမ မစားဖူးတဲ့ဆိုင် အစားအစာ မရှိသလောက်ပဲလေ… သူမက အစားချည်း တစ်လိုင်းပဲကိုး .. ဘာဘီရုပ်လေးလိုလို အမွှေစိန် ရုပ်လေးလိုလို ချစ်စရာ ကောင်းနေတာတော့ ငြင်းမရပါဘူး.. အလွန်ဆုံးရှိလှ ပေါင်က 100. ပေါ့.. ကိတ်တဲ့နေရာဆိုလို့ လိုက်ရှာကြည့်တယ်..
မိန်းခလေးများ ဝေးဝေးက ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ယောက်ျား (12) မျိုး
1) မိန်းမ တကာ နဲ့ အလွယ်တကူ ခင်မင်မှု ရရှိအောင် နေတတ်တဲ့ ယောက်ျား ။ 2) ကိုယ်နဲ့ သာမန် ခင်မင်မှုလေး ကို အကြောင်းပြပြီး မသက်ဆိုင်သော စကားများကို Message or Phone နဲ့ ပြော တတ်သော ယောက်ျား ။ 3) မိန်းခလေးများရဲ့ အလှအပ ပြင်ဆင်မှု အပေါ် အမြဲ ဝေဖန်လေ့ ရှိသော ယောက်ျား ။ 4) ပါးစပ်ရဲ လက်ရဲ ဖြင့် ဂနာမငြိမ်သော ယောက်ျား ။ 5) မိန်းခလေးများအား မထိတထိ စကား ပြော၍ စတတ် နောက်တတ်သော ယောက်ျား ။ 6) မိမိကိုယ် မိမိ
သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ချစ်ပါ… သိက္ခာရှိရှိနဲ့ပဲ လမ်းခွဲပါ
ချစ်သူ ထားတယ် ၊ ရည်းစား ထားတယ် ဆိုတာက တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ သိက္ခာနဲ့ အချစ် ဆိုတာကြီးကို အလဲအလှယ် လုပ်လိုက်ရတာ ပါပဲ ။ တကယ်လို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲလိုက်ရင်လည်း ယောက်ျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မိန်းခလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက် စလုံး နစ်နာတာ ပါပဲ ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ရင်းနှီးပြီး ချစ်ခဲ့ကြတာချင်း အတူတူ အခန့်မသင့်လို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြ ရရင် တယောက်ကိုတယောက် အရှက်ကွဲအောင် ထိုးနှက်နေဖို့ထက် သိက္ခာရှိရှိ နေကြဖို့ လိုပါတယ် ။ ကောင်လေးက …. ငါ သူ့ကို ဘယ်အဆင့်အထိ ကျုးလွန်ခဲ့တာ ၊ မိန်းခလေးက
မျက်ရည်ခိုင်မှသာ ဖတ်ပါ ။ သီရိမင်္ဂလာဈေးက ကုန်ထမ်းသမားကြီးရဲ့ သမီး ကျောင်းသူမလေး မျက်ရည်ခိုင်မှသာ ဖတ်ပါ ။ သမီး သိခဲ့ပါပြီ အဖေ အဖေဖြစ်သူက ကျောင်းကို လာပါတယ် ။ ကူလီသမားတစ်ယောက် မို့ အဖေအဝတ်စားတွေမှာမီးသွေးတွေ ပေကျံ့နေတာပေါ့ ။ ဆရာမဖြစ်သူက ဟေမန်လေးကို ” သမီး ဟိုမှာ . . ကျောင်းမှာ ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရောက်စောင့် နေတာ ။ သမီးရဲ့ အဖေမှတ်လား . . ” ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ တကယ်ပဲ အဖေဖြစ်နေသည် ။ ” ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမ သမီးအဖေပါ ”ဘေးနားက သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းပြီး ” ဟဲ့ ဟေမန်
မိန်းမကို ကိုယ်ချင်းစာပါ …
ကျနော် မနက်က အိမ်က ထွက်လာတယ် ။ ဒီနေ့တော့ ဘာမှ ဝယ်စရာ မရှိလောက်ပါဘူး ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိပ်ထဲကငွေကို စစ်မကြည့်ခဲ့ဘူး ။ တနေ့လုံး သာမာန် အသေးအဖွဲလောက်သာ သုံးရင်း တကယ်လဲ ကုန်စရာ ကြီးမားမား မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ညနေ အိမ်ပြန်ချိန် နီးတော့ ကျနော့် အလုပ်ထဲကို မထင်မှတ်ဘဲ ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေ ရောက်လာတယ်ဗျာ ။ သေချာပြီ အဲ့ဒါ ငွေကုန်ပေါက်ဘဲ ။ ဒီလို ညနေမှာ သူတို့ ရောက်လာရင် ဆိုင်တခုခုကို သွားပြီး စားကြသောက်ကြပြီးမှ အိမ်ပြန်တာ ထုံးစံပါဘဲ ။ ကျနော်က ချမ်းသာ ပြည့်စုံတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ရင်နှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ကြားမှာ
KTV ရဲ့ နောက်ကွယ်”” အိမ်ထောင်သည် မိန်းကလေးတွေဘက်က စာနာကြည့်ပါ 😡 အိမ်မှာနေပြီး အိမ်အမှုကိစ္စက တစ်ဖုံ/ ကလေးက တစ်ဖက်နဲ့ အိမ်အပြင်မထွက်ရလို့ KTV တောင် ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ အိမ်ထောင်သည် မိန်းကလေးတွေ အတွက် KTV မှာ အပျော်မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပျော်မြူးနေတဲ့… ပျော်မြူးတတ်တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ရရင် တကယ်ရင်နာစရာပါပဲ 😖…ကိုယ့်မိန်းမအပေါ် ကိုယ်သစ္စာ ရှိသင့်တာပေါ့…. ယောက်ျား ဆိုတဲ့ အမျိုးကလည်းတော်တော်တော့ခတ်သား အသစ်တွေ့တိုင်း နှာခေါင်းက မီးတောက်ချင်တဲ့သူတွေများသား (တစ်ချို့တွေပြောတာ) …. မိန်းမကို မကြည့်ရင်လည်း ရသေးတယ် အသာထား ကိုယ့်အသွေးအသားနဲ့ မွေးလာတဲ့ အိမ်က ကလေးတွေကို မိမိမှာ ရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေရဲ့အောက်မှာ အရိပ်မည်းတွေရဲ့အောက်မှာ ရှင်သန်စေချင်လို့လား? နေစေချင်လို့လား ?? အဲ့လို သားသမီးတွေ
သင့်ချစ်သူ ကောင်လေးရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ဒီ APP သုံးခု ရှိနေတယ်ဆိုရင် သေချာပြီ သတိတော့ …
တချို့ ချစ်သူတွေမှာ တစ်ယောက်ယောက်က မကောင်းတာ တစ်ခုခုလုပ်ပြီဆိုရင် ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရတတ်ဘဲ ကျန်တစ်ယောက်က အလိုအလျောက် သိနေတတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေသလားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကို အသိစိတ်ကို ယုံကြည်ဖို့ လိုသလို နည်းပညာ အရမ်း တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကိုလည်း မျက်ခြည်ပြတ်မခံဘဲ သိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ သူဘယ်လိုမှ ကိုယ့်ကို လှည့်စားလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ ပြနိုင်မှာပါ။ သူ့ ဖုန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ software တွေ ၊ app တွေက သူ့ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေကို သိစေနိုင်တဲ့အတွက် သူ့ဖုန်းထဲမှာ ဒီ app တွေရှိလား ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖွက်ထားတဲ့
သူ့မှာ ၀န်ထမ်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိတယ်။ အားလုံးကသူ့ကို “အဖေ” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူကလည်း “သား” ၊“သမီး” လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ တကယ်တော့ သူက လူပျိုကြီး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းတော့ မဟုတ်၊ အိမ်ထောင်ရှင်ထက် သားသမီး ပိုများ တယ်။ သူ့မှာ စုစုပေါင်း ၀န်ထမ်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိတယ်။ အားလုံးက သူ့ကို “အဖေ” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူကလည်း “သား” ၊“သမီး” လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ ၀န်ထမ်းဆိုပေမယ့် “မိဘ” နဲ့ “သားသမီး”ဆက်ဆံရေးကိုပဲ အလေးပေး တည်ဆောက်ထား တယ်။ သူလက်ကိုင်ထားတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုက Love Management ဆိုတဲ့ “မေတ္တာကို အခြေခံတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု”ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်လောက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့
သုသာန်မြေမှ နန်းမွေမျက်ရည် (သို့မဟုတ်) ဒီနေ့ ဈေးပိတ်သည်.. သိရသူတိုင်း ငိုရတဲ့ ပို့လေးပါ
#သုသာန်မြေမှ နန်းမွေမျက်ရည် (သို့မဟုတ်) ဒီနေ့ ဈေးပိတ်သည် ‘နန်းမွေ’ နန်းမွေဆိုတာ မီးငယ်လေး (ဥာဏသီရိ)နဲ့ ကစားတူ ကစားဖက် အလွန်ရင်းနှီးသောသူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ နန်းမွေရဲ့ အသက်က (၅)နှစ်ပင် ကောင်းကောင်း မပြည့်သေးဟု ထင်သည်။ မီးငယ်လေး (ဥာဏသီရိ) အသက်ကတော့ (၁၀)ပြည့်လို့ (၁၁)နှစ်ထဲ ရောက်ခဲ့ပြီ။ နန်းမွေသည် ဗမာမဟုတ်၊ တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်သလို မီးငယ်လေး ဥာဏသီရိလည်း ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး တစ်ယောက်ပင်။ နန်းမွေလေးသည် မိမိနှင့် စတွေ့ချိန်အခါတုန်းက ဗမာစကားပင် မပြောတတ်သေး။ တခြားသူပြောသော ဗမာစကားကိုလည်း နားမလည်သေးသောအချိန် ဖြစ်သည်။ နန်းမွေလေးမှာ အဖေအမေစသည် ရှိမရှိတော့ ကောင်းကောင်း မသိခဲ့ပါ မီးငယ်လေး ဥာဏသီရိမှာတော့ အမေရှိသည်၊ (၁၅)နှစ်အရွယ် အစ်ကိုတစ်ယောက်နှင့် မီးငယ်လေးအောက်မှာ မောင်လေးတစ်ယောက်တော့ ရှိသည်။ မီးငယ်လေးက
အိမ်ထောင်ရေး တခု သာယာ စိုပြေအောင် ဆိုရင် ယောက်ျား ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမကပဲ ဖြစ်ဖြစ် တဦးဦးတော့ တုံးနေမှ ” အ ” နေမှ ဖြစ်မယ် ။ အဲ့ဒီလိုမှ အိမ်ထောင် တခုဟာ ရေရှည် တည်မြဲ တတ်ပါတယ် ။ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံးက တော်နေ တတ်နေ တဲ့အခါ ကြတော့ အမြဲတမ်း အငြင်းအခုံတွေ အတိုက်ခံတွေနဲ့ တယောက်ကို တယောက် ဆရာလုပ်ကြရင်း အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတတ် ပါတယ် ။ တချို့ အိမ်ထောင်သည်တွေ ကြတော့လည်း နှစ်ယောက်စလုံးက တော်နေ ထက်နေ ကြပေမယ့် တဦး တယောက်က ” အ ” ချင်ယောင်